Roobab xoog leh oo ka da’ay Yemen iyo daadad waawayn oo sababay dhimashada 14 qof - Horn Future
Roobab xoog leh oo ka da’ay Yemen iyo daadad waawayn oo sababay dhimashada 14 qof
Laxaj (Horn Future)-Roobab xoog leh oo da’ay iyo daadad waawayn ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 14 qof tuullo ku taala gobolka Laxaj ee koonfurta dalka Yemen sida laga soo xigtay masuuliyiinta ilaha caafimaadka.
Cali al-Kubaati oo ah mid kamid ah bulshada deggen tuulladan ayaa warbaahinta u sheegay in roobab sidan oo kale ah aynan ka di’in gobolka muddo ku dhow 20 sanadood.
Waxa sido kale uu sheegay in 15 kamid ah baabuurta qaada xamuulka iyo 5 kuwa rakaabka qaada ay qaadeen daadadkani iyo sidoo kale dadka naftooda ku waayay.
Waxa kale oo uu sheegay inay xidhantay waddadan weyn oo ah kaliya tan isku xidha inta u dhaxaysa Caden iyo tuuladan sababta daadadkan rogmaday.
Dalka Yemen oo ah mid kamid ah dalalka ugu saboolsan dunida ayaa waxa uu sido kale ku jiraa xaalad dagaal sokeeya ah tan iyo 2014 kadib markii argagixisada shiicada xuutiyiinta oo taageero ka hela Iran ay xoog ku qabsadeen dalka intiisa badan oo ay ku jirto caasimadda Sanca,taas oo sababtay dhimashada kumanaan qof oo rayid ah iyo barakaca malaayiin kale,marka lagu shuban biyood galaaftay boqolaal qof.
« Magaalooyin Swiss ah oo ka codsaday dawlada inay siiyo dal kugalka shaqaalaha shisheeyaha	» North Korea says missile over Japan was ‘first step’